Ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ 5 na-achịkwa ezumike ahụ | Martech Zone
Ndị folks na Maxymiser kesara ozi ọhụrụ ha, Ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ 5 na-achịkwa ezumike Interwebs. Enwere m ekele dị ukwuu maka nke a n'ihi na ọtụtụ data dị n'ebe ahụ na-ezo aka na onye na-azụ ahịa… wee gbue data site na okike, afọ na ego. Nke bụ eziokwu bụ na enwere ọtụtụ mkpali dị iche iche maka ndị mmadụ ịzụrụ.
Maxymiser na-achọpụta mmadụ ise nwere mmetụta nke ndị na-azụ ahịa. Ha bụ dinta ahụ na-azụ ahịa, onye na-azụ ahịa n'ịntanetị oge mbụ, onye na-azụ ihe na-emetụ n'ahụ, onye na-azụ ahịa mkpa na onye na-azụ ahịa oge ikpeazụ.
Tags: ecommerceinfographicịzụ ahịa n'ịntanetịonline ịzụ ahịa personasndị mmadụshopping
Dee 10, 2012 na 9: 56 AM
Dika ndu m siri ike, aghaghi m ewere onwe m dika onye ikpe azu - onye na ere ahia oge ikpe azu. Ọ dị ka mgbe ọ bụla na oge a ga-eme nke a na ime nke ahụ tupu ekeresimesi tupu ịmara ya, ọ bụ ụbọchị iri abụọ nke ọnwa Disemba ma ị nweghịdị onyinye maka ezinụlọ nke gị.
Dec 10, 2012 na 5:28 PM
Anọnyeere m gị, @PetieKelly: disqus! N'ezie, ụmụ m na-eji n'ezie na-a di na nwunye ọzọ onyinye mgbe ememe… M nwere ike ghara ọbụna iguzo na-eguzo na akara ke akpatre minit!